Shirwaynihii 3-aad Ee JWXO oo Maalintii 3aad Galay + Sawiro. | ogaden24
Shirwaynihii 3-aad Ee JWXO oo Maalintii 3aad Galay + Sawiro.
Waxaa maalintii 3aad galay shirwaynihii Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeniya (JWXO) oo soo bilawday Maalintii Axada ahayd.
Shirkan ayaa waxaa kasoo qayb galay ergooyin ka kala yimid daafaha caalamka. Shirkan ayaa wuxuu u socdaa si hab sami ah waxaana khudbado kasoo jeediyay madaxda kala duwan ee JWXO Gudoomiyeyaasha jaaliyaadka iyo qaar badan oo kamida ergooyinkii shirka kasoo qayb halay.
Shirka ayaa waxaa lagu lafaguray lagagana dooday shuruucda iyo xeerasha kala duwan ee JWXO waxaana lagu ansixiyay shuruucda iyo xeerar kii Jabhadu ay ku dhaqmi lahayd. Shirka ayaa wuxuu gali doonaa waxa ka danbeeya maanta qayb tiisii 2aad waxaana horay loogasii anbaqaadi doonaa shirka ayadoo si qodob qodob ah loo dul istaagi doono.
Shirkan ayaa waxaa aad uga dhur sugaya shacabka Soomaalida Ogaadeniya ayagoo ku rajowayn inay kasoo baxeen go’aamo wax ku ool ah kuwaas oo hor seedi doona in shacabka Soomaalida Ogaadeniya ee gumaysiga ku hoos jira ay aayahooda ka tashadaan.